Gịnị mere mkpa ka ihichapụ ozi ederede na Android ekwentị?
Chọrọ enye pụọ gị ochie Android ekwentị maka onye ọhụrụ? Kpebie inye ochie Android ekwentị na ndị ọzọ ahụ, inye ya ka ọ ọrụ ebere, ma ọ bụ na-ere ya? N'agbanyeghị nke ọ bụla bụ, otu ihe ị ga-ntị bụ na SMS on gị ochie Android ekwentị nwere ike ikpughe onwe gị oké mkpa ọmụma. Iji zere na, i kwesịrị ka ihichapụ ozi ederede site na Android ekwentị. Ọbụna ma ọ bụrụ na unu adịghị cheta onye na-ezu ohi gị onwe ozi si SMS, ị nwekwara ike mkpa iji wepụ ozi ederede onwe elu ohere, karịsịa mgbe ozi igbe esịmde ya nchekwa ikike.
Hichapụ ozi na android ekwentị otu otu aka
Ị ga-amarakwa na unu pụrụ wepụ ozi ederede site na gị Android ekwentị aka. Na gị Android ekwentị, enweta Izi ozi ngwa ịbanye ozi na ihuenyo. Enweta a eri na enweta na button ọzọ na n'ụlọ button na-egosi ozi management menu. Enweta hichapụ ozi. Mgbe ahụ, nne Mmetụta iberibe ozi ị na-aga iji wepụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ niile, akọrọ Họrọ niile. Mgbe ahụ, mgbata Hichapụ.
Uru: Zuru free. Ị pụrụ ime ya onwe gị. Cons: Time na-ewe. Adịghị ka ihichapụ ọtụtụ narị ma ọ ọtụtụ puku eri na oge.
Hichapụ ozi ederede site na Android na ogbe na a ngwá ọrụ
Nwere puku nke SMS eri na gị Android ekwentị. Ka ihichapụ ha ngwa ngwa, ị kwesịrị ịjụ enyemaka si a atọ - ọzọ ngwá ọrụ. The Wondershare MobileGo for Android ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) bụ a pụrụ iche Android faili. Ma nsụgharị pụrụ inyere gị aka ihichapụ multiple SMS eri ọsọ ọsọ na mfe.
Uru: Hichapụ multiple SMS eri na oge. Cons: mkpa iji kwụọ ụgwọ (akpa 15 ụbọchị nke free).
Download nri version na PC gị na ma ọ bụ Mac na lelee nzọụkwụ n'okpuru.
Ma version ọrụ a yiri nke ahụ. Ebe a, ka na-amalite na Android SMS nhichapụ usoro na Windows version.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị gaa na Windows PC
The Windows version-enye gị ụzọ abụọ jikọọ. Na otu onye bụ ikwunye na a eriri USB kọmputa. Ndị ọzọ bụ site WiFi. N'ihi na WiFi ọrụ, i kwesịrị wụnye kwesịrị-nwere MobileGo ngwa na gị android ngwaọrụ aka.
Nzọụkwụ 2. Hichapụ SMS si gam akporo ekwentị
Na ekpe kọlụm, pịa SMS na-egosi SMS management window. Tinye akà rà eri na ị chọrọ ihichapu. Ihichapu niile, tinye akara n'igbe esote Content. Pịa Hichapụ. Na mmapụta dialog, pịa Ee na-amalite SMS nhichapụ.
Nke ahụ bụ mfe nzọụkwụ na-esi hichapụ ozi na gam akporo ekwentị. Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? N'ezie, Wondershare MobileGo for Android nwekwara ike gị mbupụ na nkwado ndabere SMS dị ka XML ma ọ bụ TXT faịlụ na kọmputa. Ọ bụrụ na ị ederede a otutu, ị nwekwara ike izipu ozi site na kọmputa ka ndị enyi gị, ezinụlọ na ndị ọzọ.
Mmekọrịta Ndi ana-akpo si Outlook ka Nexus 5 Mfe
Top 10 Free Sites Ịnara SMS Online enweghị gị Real ekwentị Number
6 Best Android Data Erasers iji nyere aka kpuchido gị Personal Data
> Resource> ihichapu> 2 Ụzọ Hichapụ Text Ozi na android ekwentị